အဆိုတော် ရေမွန်အတွက် တဦးတည်းသောညီမလေးရဲ့ ပေးစာ.. (ဖတ်ပြီး..စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာထက်ပိုပါတယ်) – Maythadin
ဘပီ…. မိသားစုထဲမှာ သားအကြီးမောင်နမ၂ယောက်လုံးက မွေးလာကတည်းက အတောင်တဖက်စီပဲ့လာသူအချင်းချင်းမို့ ကိုယ့်ခံစားချက်သူနားလည်သလိုသူ့ခံစားချက်တိုင်းလဲနားလည်ပေးတယ် ငယ်ငယ်ကဆို မိစုံဖစုံနဲ့ကြီးပျင်းလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်မှာအားကိုးစရာဆိုလို့သူပဲရှိခဲ့တယ်
အဖေလို အကိုလိုမျိူး ချစ်ရတဲ့သူ သံယောဇဉ်အရှိဆုံးသူပွဲလမ်းတွေ သွားချင်တဲ့အခါတိုင်း အမေ့ကိုခွင့်တောင်းပေးပီးအမြဲလိုက်ပို့ပေးတယ်အပြန်ကျရင်မေးတယ် “ပျော်လား ပြူးစိန် “တဲ့ငါ့ညမက အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျတတ်လို့နင်ပျော်ဖို့အရေးကြီးတယ် ငါအားရင်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးပြောနေကျအမေနဲ့ရန်ဖြစ်တိုင်းလဲကားနဲ့လာလာခေါ်ထုတ်ပေးပီးစိတ်ပျော်အောင်ထားတယ်
ဘာစားမလဲ ဘာလုပ်မလဲအကုန်နားလည်ပေးပီး နှစ်သိမ့်တတ်ဆုံးသူမို့အခုချိန်ပိုခံစားရတယ်Covid အချိန်ကတည်းက အိမ်ကစီးပွားရေအဆင်မပြေလို့သူပဲထောက်ပံ့ခဲ့တာ အိမ်လခစျေးဖိုးက အစသူ့ဘက်ကဘယ်လောက်အဆင်ပြေပြေမပြေပြေကိုယ်တွေကို ထုတ်မပြောဘူးမရရအောင်ရှာဖွေပြီးလာပေးတတ်တဲ့သူ…
သူ့အနွံတာ သူအနိုင်ကျင့်သမျှ အခံဆုံးကလဲ ကိုယ်ပဲရန်ဖြစ်တိုင်းလဲ သူအဆဲဆုံးပဲ သူပြောနေကျစကား “ငါကအကြီး ငါ့ကိုဆရာလာမလုပ်နဲ့ ” x)အမြဲတမ်း ရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်း ပန်းစည်းကြီးယူလာပီးပါးကိုလာနမ်းတယ် စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ ပြူးစိန်ဆိုပီးအပြင်ထွက်ခါနီးတိုင်းလဲ အမေနဲ့ညမကို နမ်းပီးမှသွားတတ်တဲ့သူမျိုးတနေ့ကို ဖုန်းတခေါက်ပုံမှန်မပြောဖြစ်ဘူးအမြဲ ချစ်တယ် ဆိုပြီး တဖွဖွမပြောဘူး ဒါပေမယ့် သူအရမ်းချစ်တယ် ဆိုတာသိတယ်
ဘပီရေ ဘပီကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေ မီးမီးချက်ကျွေးချင်သေးတယ် ဘပီ အဝတ်တွေလဲ လျော်ပေးချင်သေးတယ် ဘပီ စိတ်ဆိုးလို့ အော်ဆဲတဲ့ အသံလေးလဲကြားချင်သေးတယ် ဘပီ နေမကောင်းတဲ့အခါတိုင်း ပြုစုပေးချင်သေးတယ် ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ကာလကြီး ပြီးသွားရင် မိသားစုကို ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူး လိုက်ပို့မယ်ဆို? အခုဖြစ်နေတာတွေအားလုံးက တကယ်မဟုတ်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်
ဘပီချစ်တဲ့ ပြူးစိန်က ဘပီလောက်မသန်မာဘူးမရင့်ကျက်သေးဘူး ဘပီရေ ဘပီမရှိတဲ့နောက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာလဲ မတွေးတတ်တော့ဘူး​ေနရာချင်းလဲပေးလို့ရရင်သိပ်ကောင်းမယ် ဒီအချိန်မှာ အရာအားလုံးကကိုယ့်တာဝန်ကျလာပီဆိုတော့ အမေ့အတွက် ပိုပိုးလေးအတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ အသက်ဆက်ရှင်ရဦးမယ်ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုခွန်အားမျိုးနဲ့ ဆက်ရပ်တည်ရမလဲဆိုတာမသိဘူး
အခုချိန်ဆို ဘပီဘယ်ရောက်နေမလဲ???? မီးမိးတို့ ငိုနေတာတွေ့ရင် ဘပီကော ဝမ်းနည်းနေမလား??? အတွေးပေါင်းစုံ ဝင်ပြီး ရူးတော့မယ်ဘပီရယ် အပြင်မှာရာသီဥတုသိပ်အေးတယ် ရင်ထဲမှာတော့ အတော်ပူလောင်နေတယ်ေမကြီးအတွက်တော့ စိတ်ချနော် မီးမီးရှိတယ် သီချင်းလေးအတိုင်းပဲ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သာ ချန်ခဲ့ပါ သိပ်ချစ်တယ် ငါ့အကို ..